Ndinotsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi asinganditambisire nguva yangu
You are at:Home»Blogs»Tishamwaridzane»Ndinotsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi asinganditambisire nguva yangu
By Munyori weKwayedza on	 February 5, 2015 · Tishamwaridzane
INI ndiri murume ane makore 31 ndinotsvaga mukadzi akavimbika ane makore 26 kusvika 30 anodawo zvemba nekusimukira anoshanda nesimba. Ini ndoita zvematuckshop nehugweja. Ndiri negative, anondida ngaandibate pa0772 324 094.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana mumwe chete uye ndinoshanda. Ndinotsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi asinganditambisire nguva yangu. Anoda nharembozha dzangu idzi 0783 695 117.
Ndiri mukomana ane makore 24 ekuberekwa ndinozvishandira uye ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 19 kusvika 23 akavimbika. Anoda kuroorwa anotya Mwari ngaandibate pa0771 107 094.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndiri kudawo musikana ane makore ari pasi peangu anoshanda chero basa uye anoda zvekuroorwa. Ari pachokwadi ndinobatika pa0783 726 484.
Ndiri kutsvaga murume akavimbika anotya Mwari, ane rudo uye anotaura chokwadi ane makore 50 zvichikwira anoda mudzimai wekuroora. Ini ndine makore 44, nhamba dzangu idzi 0778 379 140.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana ane makore 19 zvichidzika, kunyanya kana pane anonzi Concilia nekuti ndakambodanana nemumwe ane zita irori, iii aive nerudo. Ini ndine makore 24, nhamba dzangu 0774 513 248.
Makadii? Ini ndiri musikana asina wake, ndinodawo jaya risati raroora rine makore anodarika angu. Ini ndine makore 23 zvakare ndiri monya pakusimba. Nhamba dzangu idzi 0771 238 635 asi vakaroora ndapota siyanai neni.
Ndinonzi Jah Bie ndine makore 29 uye ndiri rasta man ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Handishande ndinogara kwaMutare, ndinoda anodada nekuti ini ndinodadawo, ari HIV positive asina mwana. Ngaave akasvika O-Level kunyangwe hake akafoira. Anoda ngaandibate pa0782 308 000.
Ndiri mudzimai ane makore 29 ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Ndiri HIV negative nhare dzangu 0782 962 500.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana mupfupi mukobvu ane makore 19 okuberekwa, ndinotsvagawo mukomana wekudanana naye ane makore 21 kusvika 24. Ngaave akanaka ari mukobvu achishanda basa muHurumende. Anoda anondibata paWhatsApp pa0776 191 224.
Hazvisati zvaita, ndinodawo murume ane makore 20-30 anoshanda muHurumende ane mwana kana asina. Ndiri HIV+, ndibatei pa0776 989 679.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinoshanda basa riri nani. Ndiri kutsvagawo mukadzi ari pachokwadi anoda zvekuroorwa, ngaandibate pa0779 688 866.
Ini ndiri musikana ane makore 20 ekuberekwa ndinotsvagawo mukomana anondiroora ane makore 21 kusvika 36 asina chirwere uye akazvipira kunoongororwa ropa. Kana ane mwana 1 ndomuda, ini handina mwana. Anondida ngaandibate pa0783 784 189 kana kutumira sms asi varume vevanhu kana matsotsi kwete.
lni ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 zvichidzika. Nhamba dzangu 0737 378 406.
Ini ndiri mukadzi ane makore 43 nevana 3, ndinotsvagawo murume ane makore 44 kusvika 50. Ndinoita basa remawoko uye handisati ndave pamushonga. Anenge andifarira anondibata pa0777 385 595.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinodawo musikana wokuroora ane makore 18 – 23 ari pachokwadi anofarira kurima. Vanoda ndibatei pa0733 445 131 kana kutumira sms. Ndibatei kubva na6 mangwanani kusvika na6 manheru nekuti imwe nguva yose iyi ndinenge ndakadzima foni ndiri kubasa.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 zvichidzika. Ndaneta nematsotsi nekudaro ari pachokwadi ngaandibate pa0777 208 031.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvaka shamwari yechisikana ine makore 18-20 inoenda kusvondo, inotya Mwari. Nhamba dzangu. 0774 548 410.
Makadii? Ndinotsvakawo musikana ane makore 22 kusvika 28 chero mukadzi ane mwana mumwe chete. Ini ndine makore 33, ari HIV positive asi asingataridze kuti ndizvo zvaari ngaandibate pa+27 624 594 484.
Ndiri mukomana ane makore 34 handisati ndakambowana uye ndinotsvakawo musikana asina kumbowanikwa ari HIV+. Handisati hangu ndaongororwa ropa asi ndinovimba ndiri HIV+. Anoda anotya Mwari pamwe nekuenda kuchechi ngaandibate pa0776 221 772 chero paWhatsApp.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinodawo musikana wekuroora akavimbika anonamata. Ngaafone pa0717 321 818.
Ndiri musikana ane makore 21, ndinotya Mwari uye ndiri muimbi. Ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 kusvika 35 akanaka, anogeza anotya Mwari uye anoshashanda basi riri nani. Fonai pa0771 824 200.
Ndiri mukadzi ane makore 35, ndine mwana mumwe chete uye ndinodawo murume ane makore 36 kusvika 50. Ndinoda mugari wemaMutare. Anenge andifarira ngaandibate pa0774 746 230.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndiri kutsvakawo musikana ane makore 18-21 asina chirwere. Ane rudo ngaatumire sms pa0777 232 818.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvaga musikana ane makore 23 zvichidzika asina chirwere. Ndinoshanda muHurumende, nhamba dzangu idzi 0772 579 008.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndiri kutsvagawo musikana wekuroora kana mukadzi ane mwana 1 ane makore 19 – 28. Ari pachokwadi ngaandifonera kana kundibata paWhatsApp pa0776 300 839. Gerald T. Westgate, Harare.
Ndinonzi Alphiey, ndiri mukomana ane makore 25 uye ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23. Ndinoda anonamata, anogeza uye akanaka. Anondida anondibata pa0716 845 261.
Ndiri mukadzi ane mwana mumwe ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi ari kuda kuroora ane makore 35 zvichidzika. Ndine makore 27, ndiri kwaMutare uye ndiri negative. Ndinodawo anotya Mwari, ngaandibate pa0713 827 792.
Veduwe-e ndanzwa nematsotsi, vanoda kutamba siyanai neni. Ndiri murume ane makore 33 ndinodawo mukadzi ane makore 22 kusvika 28 HIV positive. Nhare dzangu 0737 809 454.
Ndiri mudzimai ane makore 29 ndinotsvaga murume anoda zvekuroora. Ndiri HIV negative, nhare dzangu 0782 962 500.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 22 zvichidzika ane utano uye ndinoda anoshanda seni. Ini ndiri musoja, nhamba dzangu idzi 0777 183 578.
Ndiri mukadzi ane makore 28 mwana 1, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane hutano sehwangu. Ini chikoro ndakaperera panzira basa randinongona ndere mawoko, anodhakwa pamwe neanoda zvemafaro kwete. Ane rudo, anofarira kuchengeta mhuri uye achitamba nemvura ngaandibate pa0783 340 298 asi call me back kwete.
Ndiri musikana ane makore 24 anoshanda muHurumende uye ndinoda mukomana ave kuda kuroora ane makore 26-30. Nhamba dzangu 0777 741 308.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvagawo shamwarikadzi mutete chero ane mwana mumwe. Nhamba dzangu 0716 366 274.
Ndiri murume ane makore 27 uye ndinotsvakawo mukadzi ane makore 20 – 25 wekuroora. Anoda nhare dzangu idzi 0772 743 547.
Ndinodawo mukadzi wekugara naye kwete zvemahumbwe. Ndine vana vaviri vasikana uye ndinoita basa remawoko. Ndinogara kuChinhoyi saka ndinoda anogara pedyo nei ari HIV negative. Ndinonzi Tinashe, nhamba dzangu idzi 0776 822 509.
Ini ndiri murume ane makore 40 ndinotsvagawo mukadzi anoda zveimba, andifarira ngaandibate pa0775 592 337.
Ndiri mukomana, ndinodawo shamwari yechisikana akanaka anogeza anogara kumusha. Ane makore ari pasi pe20 ngaangafone pa0775 073 804.
Makadii zvenyu? Ini ndiri mukadzi ane makore 30 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ane makore 33 zvichikwira, anoda zvemba. Anoda kuenda kunotorwa ropa anondida anondibata pa0782 672 737.
Ndine makore 30 uye ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi, ngaandibate pa0783 278 779.